पोखरामा फेरी देखियो यस्तो घातक पुतली, उपचारमा ढिलाई भए आँखाको ज्योति गुम्ने – Sapana Sanjal
September 14, 2021 190
Sapana Sanjal : पोखरा क्षेत्रमा हिजोआज (सापु) को संक्रमण देखा परेको छ । हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्र रोग बिषशेज्ञ डा. इन्द्र महर्जनका अनुसार विगत दुई साता देखि पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा परेको बताए ।
आँखामा सेतो पुतलीको झुस बिजेर रातो र सुनिएका करिब २० जना बिरामीहरु हिमालय आखाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको नेत्र विशेषज्ञ डा. महर्जनले जनाए ।
आखाँ रातो र सुनिएको अबस्थामा जति सक्दो छिटो आँखा अस्पतालमा गएर उपचार गर्दा निको हुने उनले जनाए । आखाँमा पिप परेको अबस्थामा आखाँमा सुई लगाउने र आखाँको अप्रेसन गर्ने दुई ढंगबाट उपचार गर्न सकिने भएको डा. महर्जनले जनाए ।
प्रायः गरी भदौं र असोज महिनामा देखापर्ने सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु आँखामा पर्न गएमा समयमै उपचार हुन नसके आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने डा.महर्जनले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो दुई हप्तामा सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु बिजेका कारण आँखामा पिप समेत परेर शल्यकृया गर्नु परेको उनले जनाए ।
अस्पतालमा हालसम्म पोखरा सहित बागलुङ र म्याग्दी लगायतबाट आँखाका बिरामीहरु आउने गरेको डा.महर्जनले जनाए । केही बर्ष पहिला एक बर्ष बिरायर मात्र पश्चिम तथा पोखरा क्षेत्रमा देखिन थालेको सेतो पुतली पछिल्ला बर्षबाट देशका धेरै ठाँउमा देखा पर्न थालेको उनले बताए ।
केही समय अघि ५ बर्ष मुनिका बावबालिकाहरुमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा परे पनि पछिल्लो ५ बर्ष यता सवै उमेर समुहका व्यक्तिमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा पर्न थालेको उनले जनाए ।
पोखरामा केही बर्ष देखि सेतो पुतली आतंक जस्तै भएको छ । ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा सेतो पुतली संक्रमण बढी हुने हुँदा यसबाट जोगाउन उनले आग्रह गरे । सेतो पुतली संक्रमित भएका बिरामीलाई समयमै वा एक दिन भित्र उपचार गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा पुर्याउन सकेको खण्डमा सुइ, अप्रेशन, औषधि कुनै विधिबाट उपचार सम्भव हुने डा.महर्जनले दाबी गरे ।
सेतो पुतली संक्रमणले कालो आँखाको भागमा सेतो देखिनु जहाँ ब्याक्टेरिया समेत देखिने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। उनले भने “ आँखामा एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन लगाउँदा आँखामा जमेको पिप हटाउन र ज्योति बचाउन सकिन्छ । ” सेतोपुतलीको रियाक्सनले समयमै उपचार हुन नसके आँखाको रेटिना सहितको भाग नै नष्ट पार्ने डा।महर्जनले दाबी छ । यस्तो संक्रमणबाट बचाउन सबै सरोकारवाला निकाय सजग हुन डा. मर्हजनले आग्रह गरे ।
Prevग्राण्डी अस्पतालको धन्दा : पैसा कमाउन यस्तो गर्दा रहेछन
Nextआफ्नै भाई ६७ बर्षीय शेर बहादुर तामाङलाई ……
धर्मशास्त्र अनुसार कुन कुन बार दारी र कपाल काट्नु हुदैन ? आउनु जानिराखौँ